မြန်မာနိုင်ငံက ချစ်သူစုံတွဲတွေအကြောင်းကို ၁မိနစ်ခွဲအတွင်း ပုံဖော်သွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူ Vlogger - Myannewsmedia
မြန်မာနိုင်ငံက ချစ်သူစုံတွဲတွေအကြောင်းကို ၁မိနစ်ခွဲအတွင်း ပုံဖော်သွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူ Vlogger
မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တော်တော်များများ၊ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်မကျသေးသူများက မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ နေထိုင်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေက စည်းကပ်တင်းကြပ်လွန်း၊ ပုံစံသွင်းတတ်ကြလွန်းလို့ လူငယ်တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို ထိတ်လန့်စွာနဲ့ သိုဝှက်ထားတတ်ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စမှာ မိဘတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်ပြောဆိုဖို့ကို ကြောက်လန့်ကြပါတယ်။ မိဘတွေအပြင် နေထိုင်ရတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အမြဲလိုလိုစောင့်ကြည့်ခြင်း ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ချစ်သူစုံတွဲတွေခမျာ အနမ်းလေး ပေးဖို့တောင်မှ လူရှင်းမှပေးရဲတာတို့၊ လူမမြင်မှပေးရတာတို့ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သာမာန်ပန်းခြံမှာ ချိန်းတွေ့ရင်တောင် နှစ်ကိုယ်ကြားအနမ်းတွေပေးဖို့ အကာအကွယ်အဖြစ် ထီးလေးတွေနဲ့ ကိုယ်စီဆောင်ထားကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။
နိုင်ငံခြား Blogger တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Alyne က မြန်မာစုံတွဲတွေရဲ့အဖြစ်ကို ဟာသလေးနှောပြီး အခုလိုပဲ တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာစုံတွဲတွေရဲ့အဖြစ်ကတော့ သမပြောသလို တကယ်ကိုဖြစ်နေတာနော်။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေ ထီးယူပြီး အိမ်ကထွက်သွားရင် တကယ်ရော မိုးရွာရဲ့လား ကြည့်ကြည့်ဦးနော် ???
Source: Dear Alyne
မွနျမာနိုငျငံက လူငယျတျောတျောမြားမြား၊ အထူးသဖွငျ့ အိမျထောငျမကသြေးသူမြားက မိဘအုပျထိနျးမှုအောကျမှာ နထေိုငျကွရတာ ဖွဈပါတယျ။ မိဘတှကေ စညျးကပျတငျးကွပျလှနျး၊ ပုံစံသှငျးတတျကွလှနျးလို့ လူငယျတျောတျောမြားမြားက သူတို့ရဲ့ စိတျဆန်ဒတှကေို ထိတျလနျ့စှာနဲ့ သိုဝှကျထားတတျကွပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးကိစ်စမှာ မိဘတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တိုငျပငျပွောဆိုဖို့ကို ကွောကျလနျ့ကွပါတယျ။ မိဘတှအေပွငျ နထေိုငျရတဲ့ လူမှုပတျဝနျးကငျြကလညျး အမွဲလိုလိုစောငျ့ကွညျ့ခွငျး ခံရတာဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံက ခဈြသူစုံတှဲတှခေမြာ အနမျးလေး ပေးဖို့တောငျမှ လူရှငျးမှပေးရဲတာတို့၊ လူမမွငျမှပေးရတာတို့ ဖွဈလာကွပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သာမာနျပနျးခွံမှာ ခြိနျးတှရေ့ငျတောငျ နှဈကိုယျကွားအနမျးတှပေေးဖို့ အကာအကှယျအဖွဈ ထီးလေးတှနေဲ့ ကိုယျစီဆောငျထားကွတာကို တှရေ့မှာပါ။
နိုငျငံခွား Blogger တဈဦးဖွဈတဲ့ Alyne က မွနျမာစုံတှဲတှရေဲ့အဖွဈကို ဟာသလေးနှောပွီး အခုလိုပဲ တငျပွထားပါတယျ။
မွနျမာစုံတှဲတှရေဲ့အဖွဈကတော့ သမပွောသလို တကယျကိုဖွဈနတောနျော။ မိဘတှအေနနေဲ့လညျး ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးတှေ ထီးယူပွီး အိမျကထှကျသှားရငျ တကယျရော မိုးရှာရဲ့လား ကွညျ့ကွညျ့ဦးနျော ???
Previous post “ ဖုတ် ” ၀င်တယ် ဆိုပြီး သေတဲ့အမေအိုတစ်ဦး ရဲ့ အလောင်းကို ရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ..
Next post အရွယ်ငယ်သလောက် သြချရလောက်တဲ့ အသံစွမ်းရည်ကို မက်ဆေ့သီချင်းနဲ့ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ထိပ်ထားသခင်